Lundin Petroleum oo dembi xaquuqul insaanka ka dhan ah loo heysto - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shirkada Ludin Petroleum waxaa lagu eedeynayaa in dhaqaale ku siisay dowladda Sudan si ay boqolaal kun oo qof uga qaxiso goobo ay shirkadda dooneysay shidaal in ay ka baarto.
Lundin Petroleum oo dembi xaquuqul insaanka ka dhan ah loo heysto
La daabacay måndag 28 november 2016 kl 13.27
Sida uu tabiyey wargeyska Aftonblandet guddomiyaha iyo maareeyaha shirkadda Lundin Petroleum ayaa maanta loo gacan-geliyey dacwad ah dembi ka dhan ah xaquuqul insaanka.
Dembigan loo heysta maamulka shirkadda ayaa dabo socda qaabkii ay shirkaddan uga howl-gali jirtay dalka Sudan.
Shirkaddan oo waayadii hore la oran jiray Lundin Oil ayaa lagu tuhmayaa sida uu qorey wargeyska in sanadyadii 1997-2003 ay gashay dembo ka dhan ah xaquuqul insaanka kadib markii shirkadda ay dhaqaalo ku taageertay ciidamada rejimka dalka Sudan oo xilligan dagaalo sokeeya dalkan ka socdeen dad badan ka qaxiyey meel ay shirkadda Lundin Oil dooneysay in ay ka badho ama ka qodo shidaal.
Dad kor u dhaafaya 12 000 ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dagaaladan ayna ku bara kaceen dad kor u dhaafaya 160 000, kuwas oo laga qaxiyey goobta ay shirkaddan Lundin Oil dooneysay shidaal in ay ka baarto, sida uu qorey Aftonbladet.
Laakiin dembiga lagu eedeynayo maamulka shirkadda ee maanta loo gacan geliyey micnahiisa ma ahan in dacwad lagu soo oogi dono madaxda shirkadda. Madaxa saxaafadda ee shirkadda ayaa sheegay in ay caadi tahay in laysku gacan-geliyo dokumenti ay ku qoran yahiin edeymo balse micnaheeda aysan aheyn in dacwad ugu dembeyn la soo oogi doono, ayuu yeri mar uu la hadlayey wargeyska Aftonbladet.